Tusmada &#39;Cryptocurrency index&#39; ee ka socota dillaalka «Binomo» - had iyo jeer noqo mid faa&#39;iido leh | vfxAlert official blog
Tusmada &#39;Cryptocurrency index&#39; ee ka socota dillaalka «Binomo» - had iyo jeer noqo mid faa&#39;iido leh
Adigoo furaya ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah, waxaad ku kasban kartaa macaash daqiiqado yar gudahood. Laakiin markay dhammaadka usbuuca ama ciidaha yimaadaan, lacagta iyo suuqyada saamiyada ayaa xiran ganacsiguna wuu joogsanayaa. Maqaalkan, waxaan kuu sheegi doonaa sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah marka kuwa kale ay nasanayaan. Tilmaamahan waxaa bixiya cryptocurrencies iyo tusmooyinka tusmooyinka.
Isweydaarsiga Cryptocurrency wuxuu shaqeeyaa 24 saacadood / 7 maalmood, ka hor intaanan furin ikhtiyaar, waxaan eegeynaa boqolkiiba faa'iidada uu bixiyo dillaalku. Istaraatiijiyad kasta oo maaraynta lacagta ah, waa inay ahaataa ugu yaraan 75-85%, haddii kale, suurtagal noqon mayso in magdhaw laga bixiyo calaamadaha binary ee bilaashka ah ee qaab la aqbali karo. Nasiib darrose, dilaaliinta badankood waxay bixiyaan boqolkiiba ka hooseeya. Mise si isdaba joog ah ayey isu beddeleysaa iyadoo ballaaran!
Boqolleyda faa'iidooyinka calaamadaha binary waa xasilloon tahay 83%, ikhtiyaar ka yimid 1 dollar. 2da soo socota ee ikhtiyaarrada waxtarka leh ayaa ku filan inay daboolaan luminta, taas oo aan dhibaato ku ahayn xitaa xeeladaha muddada-gaaban;
Akhristaha ayaa diidi kara: “Xisaabinta Crypto IDX waxay lamid tahay tusmooyinka saamiyada (S&P 500, Dow Jones, NASDAQ 100 iyo kuwa kale) iyadoo la adeegsanayo qiimaha saamiyada shirkadaha ee qaybta dhabta ah ee dhaqaalaha. Laakiin cryptocurrencies ma laha nuxur dhab ah. Miyaa la isticmaali karaa qaababka falanqaynta farsamada caadiga ah ama looma adeegsan karo? ”Jawaab: waxaad arki kartaa tusaalooyin yar si aad tan u xaqiijiso.
Waxaan u adeegsannaa bot ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah sida soo socota: ugu horreyntii, waxaan eegeynaa Bitcoin oo u wareegeysa dhammaan suuqyada cryptocurrency. Haddii qiimuhu kor u kaco, isbeddelka ugu weyn ayaa kor iyo hoos u socda haddii uu hoos u dhaco. Calaamado dheeri ah oo lammaanaha kale ah oo lagu daray tusmada, iyo haddii dhammaan vfxAlert hal jiho u tahay calaamad xoog leh. Xisaabinta waxaa sameeya xog taariikhi ah iyo tilmaamayaal farsamo; waxaad marin u heli kartaa ikhtiyaarka adigoon xaqiijin dheeraad ah helin.
Saadaashu waxay sax ahayd, kor u kaca iyo ikhtiyaarka macaashka. Iyadoo ay taasi jirto, raadi xaqiijin dheeri ah, xitaa haddii vfxAlert ay siiso calaamad adag!
Nidaamka waxaa soo saaray ganacsigii bariiska Japan ee Munehisa Homma sanadkii 1755 mana uusan badalin wax weyn ilaa maanta. Wuxuu sidoo kale helay qaababka shumaca ee ugu muhiimsan ee go'aamiya dib u noqoshada ama sii socoshada dhaqdhaqaaqa qiimaha hadda jira.
Marka laga eego aragtida falanqaynta farsamada, shumacyadu waxay xaqiijinayaan mabda'a aasaasiga ah ee aragtida Dow: qiimaha (shumaca) waxaa ku jira dhammaan arrimaha saameynaya, falanqeyn dheeri ah looma baahna.
Isla marka qaabka soo noqoshada sida "Doji" u muuqdo, ku fur ikhtiyaar xaqiijin ka socota vfxAlert.
Newbie badanaa waxay ku ganacsadaan shaybaar, iyagoo ilaaway in xaalada suuqa aan waligeed lagu celin 100%. Isku-darka shumaca ee keena macaash sanad ka hor ayaa hadda u horseedi kara khasaaro. Waxaan ubaahanahay xakameyn joogto ah horumarka saxda ah ee qaababka!
Isku Darka Celceliska Dhaqdhaqaaqa
Tusaalaha soo socda ee Moverage Average waa tilmaame isbeddel caadi ah. Ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo isgoyska celceliska "dhakhso" iyo "gaabis ah" Haddii isbeddellada ay xooggan yihiin, waxaad intaas dheer ku furi kartaa dib-u-celinta ka timid Celceliska Dhaqdhaqaaqa.
Istaraatijiyad ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh laga bilaabo Moving Average ayaa si fiican u shaqeysa. Aynu furno ikhtiyaar iyaga la'aanteed kaliya oscillators:
Fur heshiis shumaca xiga ka dib calaamadaha binary . Waqtiga uu dhacayo ikhtiyaariyada waa inuu ahaadaa ugu yaraan 5-7 daqiiqo, xitaa haddii daqiiqad loo xusho inay tahay waqtiga shaqada, sida fiidiyowgeena.
Istaraatiijiyad isku dhafan «Degdeg ah»
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa saddex tilmaamood oo farsamo:
Gorgor (8, 4, 2). Tilmaamaha isbeddelka Bill Williams, kaas oo aan ku go'aansano barta furitaanka ikhtiyaarka. Istaraatiijiyadda looma jeedin ganacsiga inta lagu jiro xilliyada guryaha. Waxaan ka ganacsaneynaa oo keliya haddii qiyaasta ugu yaraan ay tahay 15-25 dhibcood!
RSI oo leh muddo 14 iyo heer dheeri ah oo ah 70/30. Tilmaamayaasha isbeddelka waa in ay daruuri tahay in lagu xaqiijiyo ugu yaraan hal oscillator oo tilmaamaya xad dhaaf ah markii iibsadayaashu aysan mar dambe qiimaha kor u qaadi karin, ama dhaafin karin meesha aysan jirin cid ugu dhow suuqa oo ku iibin karta qiimo hoose.
MACD (6, 12, 9). Tilmaamahan wuxuu u shaqeeyaa labadaba isbeddel ahaan iyo sida qalab oscillator ah, sidaas darteed waxay noqon doontaa calaamadda ugu dambeysa ee lagu furo ikhtiyaar.
Istaraatiijiyadda ikhtiyaariga ah ayaa lagu xiray macaashka !! Aan soo koobno.
Inkasta oo ay jirto xaraf yar yar marka la barbardhigo lammaanaha lacagta iyo hantida lagu kala beddelo, waa hanti ganacsi oo dhab ah taas oo ka dhigaysa mid suurtagal ka dhigaysa wax badan oo joogto ah;
Bitcoin ayaa saldhig u noqon doonta istiraatiijiyad kasta. Ugu horreyntii, waan eegnaa, xitaa haddii ay tahay tusmo. Lacagaha kale, xitaa haddii ay gadaal uga socdaan dib u dhac. Marka laga reebo Ethereum waa isbeddelka ka soo horjeedka, dib u celinta iyo saxitaanka. Tani caadi ahaan waa kiiska markii la daabacayo dhacdooyinka muhiimka ah ee ku saabsan lacagta, falalka mala awaalka ahi waa kuwa muddo gaaban soconaya oo aan dhici doonin.
Tilmaamayaasha farsamada aasaasiga ah (Dhaqdhaqaaqa Celceliska, MACD / Stochastic / RSI, Muga / Dareenka / CCI) iyo istaraatiijiyada ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa si sax ah ugu shaqeeya iyaga.
Binomo wuxuu leeyahay sumcad inuu yahay dillaal lagu kalsoon yahay wuxuuna bixinayay Crypto IDX dhowr sano hadda. Ikhtiyaarrada waxaa lagu furay daahitaannada ugu yar, ma jiraan wax dhibaato ah oo laxiriirta macaashka oo ganacsade kastaa wuxuu heli karaa dakhli dheeri ah iyada oo aan loo baahnayn in la beddelo istiraatiijiyadda iyo qaabka ganacsiga.